Ukulungelelanisa ukuThengiswa kweLizwe kwiMveliso eNye kumazwe angama-23 | Martech Zone
Ukulungelelanisa ukuThengiswa kweLizwe kwiNqaku elinye kwiZizwe ezingama-23
NgoMvulo, nge-9 kaJanuwari, 2017 UNate Holmes
Njengophawu lomhlaba jikelele, awunayo jikelele abaphulaphuli. Abaphulaphuli bakho baquka abaphulaphuli bengingqi nabasekhaya abaninzi. Kwaye ngaphakathi komnye nomnye wabaphulaphuli kukho amabali athile aza kubanjwa kwaye axelwe. La mabali awaveli nje ngomlingo. Kufuneka kubekho inyathelo lokuzifumana, ukubamba, kunye nokwabelana ngazo. Kuthatha unxibelelwano nentsebenziswano. Xa isenzeka, sisixhobo esinamandla sokudibanisa uphawu lwakho kubaphulaphuli bakho. Ke usebenza njani kunye namaqela ajikeleza amazwe angama-23, iilwimi ezintlanu eziphambili, kunye nemimandla yexesha eli-15?
Ukwakha uphawu oluhambelanayo lwehlabathi: inyani enamaphepha angama-50 enezikhokelo zophawu
Izikhokelo zeBrand zibalulekile ekugcineni uphawu oluhambelanayo. Banika amaqela akho ukuqonda ukuba ngubani, yintoni, kutheni, kwaye njani uphawu. Kodwa uxwebhu olunamaphepha angama-50 lwemigangatho yophawu lodwa alunakukhulisa uphawu lwehlabathi. Yisiqwenga esinye kuphela ekufuneka sidityaniswe namabali abaxhasi kunye nomxholo wokunxibelelana nabo.
Ngaba utyale ixesha elininzi kunye nemali kwiphulo lophawu lwehlabathi ukufumanisa ukuba amaqela akho kwihlabathi liphela akaphenduli? Izikhokelo zebhanti enkulu zodwa azizukubandakanya amaqela kwihlabathi liphela emva kokukhupha enye. Nokuba inemithetho yonke kwaye ijongeka intle, ayizukuphila. Kwaye nangomsebenzi omangalisayo owenzekayo, akukho mzamo wokwabelana namanye amazwe.
Uphawu lwehlabathi kufuneka luthengise kubaphulaphuli basekhaya nakwimimandla kwaye lithembele kumaqela akho okuthengisa ukuba anikezele ngemikhankaso yentengiso yendawo
Abaphulaphuli bakho ekujoliswe kubo ayinguye wonke umntu. Akukho mntu ubumbeneyo "wehlabathi" iqela lakho elinokuthi ligxile kulo. Abaphulaphuli bakho baquka abaphulaphuli abaninzi bendawo. Xa uzama ukuthengisa kuye wonke umntu usebenzisa ulwimi olufanayo kunye neefoto, ugqibela ngokuthatha iifoto zesitokhwe ekungekho mntu unxulumene naso. Ukumisela ukuxhobisa iqela ngalinye lentengiso kumazwe angama-23 ukuba lifake kwaye labelane ngala mabali ngokwahlukeneyo, la mabali aya kuba sisiseko sophawu olutsha noluphuculweyo.
Ibali lakho lehlabathi lenziwe ngamabali endawo
Uphawu lwehlabathi alunakuba yindlela yendlela enye ngaphandle kwekomkhulu. Isikhokelo kunye nolwalathiso oluvela kwikomkhulu kubalulekile, kodwa isicwangciso-qhinga sakho sehlabathi akufuneki silihoye ixabiso labo basondeleyo kubaphulaphuli uphawu oluthethayo. Kufuneka kubekho ukutshintshiselana ngezimvo kunye nomxholo phakathi kwekomkhulu kunye namaqela kwihlabathi liphela. Oku kwandisa ukufikelela kwebrendi yakho kwaye kunika amaqela ehlabathi ubunini bebhrendi.
Olu hlobo "lokuvumela ubuchule" lwentanda-bulumko aluxhobisi amaqela endawo kuphela kodwa lubonelela ngamabali asemgangathweni kunye nomxholo kwamanye amaqela emimandla nakwikomkhulu lawo. Ngemibono emininzi kunye nokwabelana ngomxholo, uyondelelwano ngakumbi kwaye uyaphila uphawu lwentengiso luya kuba.
Ukudibanisa amaqela okuthengisa kumazwe angama-23
Xa usebenza kwiindawo ezili-15 ezahlukeneyo, awunakuthembela kwiminxeba ibe kuphela kwendlela yokunxibelelana, ngakumbi xa ujongene nolwakhiwo lwamazwe asaphuhlayo olunokukhokelela kwiminxeba ehla rhoqo. Ukuhambisa imodeli yokuzixhasa ngokwakho kwenza ukuba amaqela afumane oko akufunayo, xa eyifuna.
Amaqela kufuneka asete i Ulawulo lweefajithali (DAM) inkqubo. Inkqubo ye-DAM yindawo enomdla, efikelelekayo apho nabani na anokufikelela okanye enze igalelo kumxholo. Iququzelela ukwabelana ngamabali kunye nomxholo. Ukudala ixabiso kwaba bathengisi basebenza nzima kuncede ukukhula kwenkqubo ngokwasemzimbeni, apho i-doc yohlobo oluzimeleyo yawa phantsi.
Inkqubo ye-DAM isebenza njengeziko eliphambili lomxholo kuwo onke amaqela. Inika amandla okuqhagamshela kunye nokubeka iliso kumxholo oqulathe amabali awafumanayo, kwaye ngokulula inika ukungafihli kwinto eyenziwa ngamanye amaqela. Sebenzisa inkqubo ye-DAM exhobisa ikomkhulu, amaqela endawo, kunye nabanye ukuba basebenzisane- hayi ukusebenza nje ngokukodwa.
Ulawulo lweeasethi zedijithali luwadibanisa njani amazwe angama-23
Ukuqesha umfoti wezithombe wasekhaya ukufota amabali abaxhasi, kunye nokusebenzisa iifoto kwimikhankaso yentengiso yendawo. Kodwa ayipheleli apho. Iifoto zinokufakwa kwinkqubo ye-DAM kwaye zijongwe kumgangatho kunye nemethadatha eyabelweyo. Ziye zifikeleleke ukuba zisetyenziselwe ezinye iinkxaso-mali, i-imeyile ethe ngqo yomntu wesithathu, kunye nekomkhulu kwiingxelo zonyaka. Ukutshintsha ukugxila ekuxhobiseni amaqela abo okuthengisa asekhaya kuncede ukusasazeka kwezimvo, ukuhambisa amaphulo entengiso, kunye nokwabelana ngamabali empumelelo.
tags: ukulawula impahlaUkufaka uphawuidamaUlawulo lwee-asethi zedijithalijikeleleuphawu lwehlabathiyandisa
UNate Holmes ngumququzeleli wentengiso Wandise Amashishini kunye nayo Ubume ulwandiso lwebrand. UNate unomdla omkhulu kulawulo lwebrand, ukuthengisa umxholo kunye nohlalutyo lokuthengisa. UNate uyakonwabela ukusebenza nabantu abaneemvelaphi ezahlukileyo kumbutho wabo bonke ubungakanani, ukusukela kumaqela onxibelelwano okuthengisa kumashishini amakhulu ukuya kwiinqununu zamashishini amancinci ukuya aphakathi.
Ukuthengisa kwi-Intanethi: Ukufumana iiTrigger zakho zokuThenga izinto eziCelwayo
Iibhaluni, iBubble Gum kunye neMartech: Yeyiphi Engeyiyo?